Edemede Jeff Kupietzky na Martech Zone |
Edemede site na Jeff Kupietzky
Jeff na-eje ozi dị ka CEO nke Jeeng, ụlọ ọrụ teknụzụ ọhụrụ na-enyere ụlọ ọrụ aka itinye akwụkwọ akụkọ email ha site na ọdịnaya dị ike. Onye na-ekwu okwu ugboro ugboro na Digital Media ogbako, a na-egosipụtakwa ya na CNN, CNBC, na ọtụtụ akwụkwọ akụkọ na azụmahịa. Jeff nwetara MBA nwere oke dị elu na Harvard Business School wee gụchaa Summa Cum Laude na BA na Economics na Mahadum Columbia.
Fraịde, Machị 4, 2022 Fraịde, Machị 4, 2022 Jeff Kupietzky
Ụlọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ na-egosi na ọ na-aga n'ihu na ike nke akwụkwọ akụkọ ozi-e iji tinye ndị na-ege ntị aka na ịzụ ahịa. Nke mbu, Axios kwuputara laa azụ na Septemba na ọ na-agbasa mgbasa ozi mpaghara ya na mwepụta nke akwụkwọ akụkọ asatọ akọwapụtara obodo. Ugbu a, The Atlantic ekwuputala mwepụta nke onyinye email ọhụrụ ise, na mgbakwunye na ihe karịrị iri na abuo ndị ọzọ ndebanye aha e-mail pụrụ iche na-ekesa. Ihe ndị a na ọtụtụ ndị nkwusa ndị ọzọ maara bụ email ahụ ezubere iche
Ndị mbipụta: Paywalls kwesịrị ịnwụ. Enwere ụzọ ka mma iji nweta ego
Fraịdee, Nọvemba 19, 2021 Fraịdee, Nọvemba 19, 2021 Jeff Kupietzky
Paywalls aghọwo ihe a na-ahụkarị na mbipụta dijitalụ, mana ha adịghị arụ ọrụ ma na-emepụta ihe mgbochi na mgbasa ozi nweere onwe ya. Kama, ndị mbipụta ga-eji mgbasa ozi nweta ego ọwa ọhụrụ wee nye ndị na-azụ ahịa ọdịnaya ha chọrọ n'efu. Laa azụ na 90s, mgbe ndị mbipụta malitere ịkwaga ọdịnaya ha n'ịntanetị, e nwere usoro dị iche iche pụtara: naanị isi akụkọ maka ụfọdụ, mbipụta dum maka ndị ọzọ. Ka ha na-ewu ọnụnọ webụ, ụdị ọhụrụ nke naanị dijitalụ
Afọ gara aga siiri ndị nkwusa ike. N’iburu ọgba aghara nke COVID-19, ntuli aka, na ọgba aghara mmekọrịta ọha na eze, ọtụtụ mmadụ ejirila ọtụtụ akụkọ na ntụrụndụ karịa afọ gara aga karịa mgbe ọ bụla ọzọ. Mana obi abụọ ha nwere banyere isi mmalite ndị na-enye ozi ahụ erutegogola oge ọ bụla, dịka ịrị elu nke akụkọ na-abụghị eziokwu kpaliri ntụkwasị obi na mgbasa ozi mmekọrịta yana ọbụlagodi injin ọchụchọ iji dekọọ obere. Nsogbu a nwere ndị nkwusa n'ofe niile nke ọdịnaya na-agba mgba
PowerInbox: Nzuzo Izipu Ozi Nke Onwe, Akpaghị Aka, Multichannel
Monday, November 16, 2020 Monday, November 16, 2020 Jeff Kupietzky
Dị ka ndị na-ere ahịa, anyị maara na itinye ndị na-ege ntị ziri ezi ozi ziri ezi banyere ọwa kwesịrị ekwesị dị oke egwu, mana dịkwa oke ike. Site na ọtụtụ ọwa na nyiwe-site na mgbasa ozi mmekọrịta na mgbasa ozi ọdịnala-o siri ike ịmata ebe ị ga-etinye mgbalị gị. Ma, n’ezie, oge bụ ezigbo akụ - enwere ihe ị ga - eme (ma ọ bụ na ị nwere ike ịme ya), karịa oge na ndị ọrụ ga - eme ya. Ndị nkwusa dijitalụ na-enwe mmetụta nke nrụgide a
Nzọụkwụ 3 na Usoro Mgbasa Ozi Di Ike maka ndị na-ebipụta akwụkwọ na-akwọ aka na ego
Wenezde, August 26, 2020 Wenezde, August 26, 2020 Jeff Kupietzky
Ebe ndị ahịa na-arịwanye elu n'ị consumptionụ akụkọ banyere ọnlaịnụ ma nwee ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ dị, ndị mbipụta ebipụta ahụla ka ego ha si enweta. Na maka ọtụtụ, ọ bụ ihe siri ike imeghari ka a dijitalụ atụmatụ na n'ezie na-arụ ọrụ. Paywalls abụrụla ọdachi, na-eme ka ndị debanyere aha gaa n'ọtụtụ ọdịnaya enweghị ego. Ngosiputa mgbasa ozi na ọdịnaya nkwado enyerela aka, mana mmemme a na-ere ere na-arụsi ọrụ ike ma na-efu oke ego, na-eme ka ha ghara iru.